Waxa Ay Ku Guuleysatay 2.5 Milyan Oo Doolar..Maantase Macaawino Ayey Ku Nooshahahy | Xaqiiqonews
Waxa Ay Ku Guuleysatay 2.5 Milyan Oo Doolar..Maantase Macaawino Ayey Ku Nooshahahy
Waxaa muuqata xaqiiqada oraahda ah “wixii si fudud kugu soo gala si fuded ayey ku baxaan”, arintan waxa ay ku dhacday gabadhii ugu yareyd ee ku guuleysata Nasiibka loo yaqaan “Britain lottery”.
ka dib 18 sano oo ka soo wargeegtay markii ay ku guuleysatay lacag dhan 2.5 milyan oo doolar, callie rogers waxa ay hadda ku nooshahay xogaaga macaawinada ee ay dowladda ku caawiso, madaama lacagteedii oo dhan ay ka soo takhalustay.
callie Rogers ayaa aheyd guuleystihii ugu da’ yaraa ee ku guuleystay Nasiibka Biritan (Britain lottery) sanadkii 2003-dii, iyada oo barigaasi jirtay 16 sano, sida laga soo xigtay webseetka The Sun.
Markii ugu dambeysay, Rogers waxa ay iska jabisay baabuurkeeda xilli ay baabuurka waday iyada oo cabsan daroogada Kookayn, kolaakaasi oo markii booliska xereen laga warhelay in aheyd kashaantidii ku guuleysatay 2.5-ka milyan ee doolar.
Waxaa laga sheegay, markii ay heshay lacagtaas sidaas u badan, Rogers in ay qarash badan ku dhumisay camaliyaatka is-qurxinta, xaflado, soo iibashada dharka aadka qaaliga u ah iyo daroogo isticmaalka, iyada oo sidoo kale qoyskeeda iyo saaxibada ugu deeqday lacag 700 oo kun oo dolar.
Rogers oo mar ka hadleysay sida ay noolasheeda u burburtay ka dib markii ay noqotay milyaneer “maalin taajir ah”, waxa ay dalbatay dowladda in ay ka warheyso guuleystayaasha aadka u yar yar sideeda oo kale.
Rogers waxa ay iskaga nooleyda guri caadi ah ka hor inta aysan ku guuleysan nasiibka, markaasi wixii ka dambeeyey waxa ay guursatay nin kaasi oo noolasheeda geliyey dhibaato qoys -sida ay warka u dhigtay.
Xukuumadda Britain ayaa caruurteeda ka qaadatay markii Rogers ay madaxa la gashay “dunida daroogada”, waa arinta ku sababtay in ay qarash madaxaada ka weyn ay ku bixiso camaliyaatka is-qurxinta.
Rogers waxaa kale oo ay xustay in dad badani ay isku dayeen u soo dhawaanshaheeda markii ay ogaadeen hantida ay ku guuleysatay, taasi oo ku abuurtay dhibaatooyin nafsaani ah oo badan.